पदको लागि लगानिकर्तासंघ खोल्न होडबाजी चलेका बेला के भन्छन् नयन बास्तोला ? (अन्तर्वार्ता) -
काठमाडौँ : पदको लागि पुँजिबजार लगानीकर्ता संघ खोल्न यतिबेला होडबाजी नै चलेको जस्तो देखिएको छ । लगानीकर्ता संघ जति नै धेरै खोले पनि संघको उद्देश्य भने एउटै हुन्छ तर यस्तोमा आँफु राम्रो पदमा पुग्छु भन्दै नयाँ संघ नै खोल्नु लगानीकर्ताका लागि राम्रो विषय त पक्कै पनि होइन होला । यहि विषयवस्तुमा आधारित रहि आज हामिले नेपाल पुँजिबजारका सक्रिय लगानीकर्ता नयन्द्र बास्तोलासँग कुरा गरेका छौँ । आउनुहोस् जानौँ यस विषयमा नयन्द्र बास्तोला के भन्नुहुन्छ ।
पुँजिबजार लगानिकर्ता संघको कोर टिम मा हुनुहुन्थ्यो ? तर तपाईहरुको संघ त दुई वटा भए छ नि ?
बिडम्बना यही छ हेर्नुस् सबै लाई पद चाहिएको छ त्यसैको एउटा मात्र कारण हो नेपाल पुँजिबजार संघका केही साथीहरुले अर्को संघ गठन गर्नु भएछ । नेपाल देश बिकास नहुनुको कारण पनि सबै नेताहरुलाई पद चाहिएर नै हो नि त ।
केही साथीहरु भन्नु भयो तर नयाँ संघले त बहुमतबाट अध्यक्ष्यलाई कारबाही गरेको प्रेस नोट नै जारी गर्नु भएको थियो तर तपाईंको नाम अर्को नयाँ संघमा नि छैन र कारबाही पनि गरिएको छैन । वास्तविकता के हो जानकारी दिन मिल्छ ?
वास्तविक के हो भन्दा हेर्नुस् मैले नि त्यो प्रेस नोट हेरेको थिए त्यहाँ समितिका एक जना ब्यक्ती लाई मात्र कारबाही गरिएको छ भनिएको छ र अरु दुई जना सदस्यको बारेमा केही बोलेको छैन । हेर्नुस् पुँजिबजार लगानिकर्ता संघ नेपालको संचालक समिति सात जना रहेको छ र एक जनालाई मात्र कारबाही गरेर अरु सदस्य बारे नबोल्नु नै जुन साथीहरु छुटिएर जानु भयो त्यो सरासर प्रकृयागत रुपमा उहाँहरु गलत हुनुभयो ।
तर नयाँ संघ कि अध्यक्ष्यले त हाम्रो टिममा छ जना मात्र थियौँ भन्नु भयको छ नि ?
हा हा हेर्नुस् कुनै पनि सञ्चालक समिती वा टिममा बहुमतको निर्णय गर्नु पर्‍यो भने संयोजक वा अध्यक्ष्य जो छ उसले निर्णायक मत दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसो भएका कारणले कुनै पनि संघ संस्थामा बिजोर अंकको सञ्चालक समिती रहन्छ । अब भन्नुस् त उहाँ उपाध्यक्षलाई नै सञ्चालक समितिमी कती, को-को छन थाहा छैन भने उहाँ लाई कसरी बुझ्ने ?
त्यसो भय तपाईंहरुको संघमा को को हुनुहुन्थो ?
हेर्नुस् म कुनै संघमा थिइन आफ्नै ठाउँ बाट अगाडि बडी राखेको थिए । यसै क्रममा नवराज सुबेदी सरले एउटा कार्यक्रम गर्दै छौँ नयन जि आउनुस् है भनेपछि म नि त्यो कार्यक्रममा गएको थिए । कार्यक्रम सकिए पछी नवराज सरले एउटा प्रस्ताव गर्नु भयो । त्यहाँ राधा पोख्रेल, एन बि थापा, य्स पि चौलागाइ, राजु पौडेल, म र कमल भारती थियौँ । अब तपाईं हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट एकला-एक्लै अगाडि बढ्नु भन्दा संघमा बसेर काम गरौँ, नयाँ युवाहरुको संघ बनाउँ, सबैलाई समेटेर अगाडि बढौँ । सात वटै प्रदेशमा संयोजक बनाइ सेयर शिक्षा दिने ब्यबस्था गरौँ र आम लगानीकर्ताका हक हित को लागि लड्नु पर्छ त्यस कारण एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताब गरेपछि भन्नु भयो यो संघ अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ । पहिलाका साथीहरु कोही कता कोही कता हुनुभयो अब हामी मिली संघ दर्ता श्रावणमा गरौँ भनी सकेपछि तपाईहरु को-को कुन पद मा बस्नुहुन्छ ? यदी अध्यक्ष नि बस्न चाहनु हुन्छ भने म सल्लाहाकार बसी सम्पूर्ण सहयोग गर्छु भनेपछि म बाट शुरु भयो कुन पद मा बस्ने भन्ने कुरा ।
मैले अरु लाई रोज्न भने किन कि म कुनै पदमा भन्दा सदस्य भएर मात्रा बस्न चाहन्थे त्यसपछि राधा पोख्रेलले म उपाध्य्क्ष्य बस्ने भन्नु भयो । मैले समर्थन गरी हाले संबिधान मा नि एक अध्यक्ष्य र उपाध्यक्ष फरक फरक लिङ् को हुनु पर्छ भनी उहाँ उपाध्य्क्ष हुनुभयो ।
त्यसपछि सचिब मा यस पि चौलागाई बस्छु भन्नु भयो । कोशाध्यक्ष्यमा राजु पौडेल बस्न नवराज सरले प्रस्ताब गर्नु भयो । अब महासचिबको पद खाली थियो मैले कमल भारती सर पहिला नि महासचिब, त्यसमा उहाँ नै बस्नु पर्छ भन्दा त्यो अहिले लाई खाली राखौँ भनी कमल भारतीले भनेपछि बाँकी तीन जना सदस्यमा नयन बास्तोला, एन बि थापा र हरी कुमार कार्की रहने गरी सात सदस्य समिती गठन भयो । अनी सबै सदस्यबाट एक हजार पैसा जम्मा गरी राजु पौडेललाई जिम्मा दियौँ । मिटिङ बस्दा चिया पानी खाँदा उहाँले पे गर्ने भनी तर एक पटक पनि त्यो पैसा खर्च भएन ।
बहुमत कसरी पुग्यो त नयाँ संघ खोल्न लाई ?
हेर्नुस् हामीले श्रावन मा यो संघ दर्ता गर्ने भनी निर्णय गरेका थियौँ धेरै पटक मिटिङ बसियो धेरै ठाउँ गयौँ त्यहा नवराज सरले जस्लाइ पनि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, पुमोरी जहाँ पनि नवराज जि ले हाम्रो संघ का पदाधिकारीहरु भनी परिचय गराउनुहुन्थो । यसै क्रममा मेसेन्जरमा कोर टिम बनाई कुराहरु हुन्थे । त्यसपछि राधा पोख्रेलका भिनाजु एस पि चौलागाइ सरका मामा नवराज घिमिरेलाई नि समाबेश गरिएको थियो ।
त्यसै क्रममा घाटा मा पनि कर लगाउनु पर्छ भन्ने सरकारको निर्णयको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उठेपछि सुरुमा तीन वटै संघ एक भएर जानु पर्छ भन्ने कुरा हुँदा नेपाल इन्भेस्टर फोरमको अफिसमा भएको मिटिङमा राजु पौडेल जानु भयो र अब आन्दोलन गर्नु पर्छ यो त सरकारको तर्फबाट नबुझी लगानिकर्ता माथि लगाइएको अव्यावहारिक कर हो भन्ने भएपछि त्यसको भोली बिहान ब्रोकर एसोशियसन सँग बसी सल्लाहा गर्ने अनी आन्दोलनको घोषणा गर्ने निर्णय भयपछि भोली पल्ट बिहान ब्रोकर एसोशियसन सँग बार्ता गरियो । बार्तामा हामी सरकारले दिएको लाइसेन्स बोकेर ब्यापार गर्ने संस्था हौँ, हामीले कारोबार बन्द गर्न मिल्दैन होला भन्ने कुरा आएपछि हामीले आजलाई सकेसम्म सांकेतिक रुपमा भएपनि एक घण्टा कारोबार रोकिदिनुस् भन्दा एसोशियसनले जवाफ दिएन । अधिकारिक चिठ्ठी हामीलाई चाहिन्छ भने पछी चिट्ठी पठाउने निर्णय गरियो । साथै आन्दोलन गर्ने पनि सहमती गरियो त्यही समयमा सरकारबाट बार्तामा आउने भन्ने खबर आएपछि त्यहाँ तीन जना जाने कुरा भयो ।
त्यो बेला अध्यक्ष्य नबराज सर गाउँ जानु भएको थाहा भयो । उहाँ नहुँदा नि हामीले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरियो र बार्तामा राधा पोख्रेल जानु भयो । तर बार्ता सफल भयन कारोबार पनि रोकिएन तर सरकारले कर समस्या समाधान गर्ने भनी एउटा समिती गठन गर्‍यो तर त्यसको समय १५ दिन त्यसमा नयाँ कर लगाएर जाने कुरा आएपछि फेरी भोली पनि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरियो र फेरी ब्रोकर लाई चिठ्ठी पठाइयो । तेस्रो दिन धितोपत्र बोर्डमा बिरोध कार्यक्रम गर्दा नवराज सर आइसक्नु भएको थियो र आन्दोलन जारी राखी सबै ब्रोकरकोमा जाने कुनै लगानिकर्तालाई पनि कारोबार नगर्न भनी सम्झाउने भनेर सबै आ-आफ्नो कारोबार गर्ने ब्रोकरकोमा गई कारोबार गर्न नदिने भनी पुतलिसडक एरियामा पुगेपछि फेरी सरकारले बार्तामा बोलायो र साथीहरु बार्तामा जानु भयो र बार्तामा नयाँ निर्णय इस्थगन गरी समितिमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने निर्णय भएपछि कारोबार खुल्ला गरियो ।
त्यस पछी राधा जिमा घमन्ड बढेछ म एक्लै पनि संघ चलाउन सक्छु भनेर । त्यसमा उहाँलाई सल्लहाकार भिनाजुले साथ दिनु भयो । दाईले र अरु दुई जना साथीहरु मिली जुन हामीले बनाएको योजना थियो त्यही हामी बाहेक नयाँ संघ खोल्ने देखी सोही बमोजिम सबै काम अहिले गरेको फेसबुकमा देखिन्छ । त्यस कारण उहाँहरुलाई बहुमत चाहिएन ।
नयाँ संघले त ब्यापक कार्यक्रम गर्‍यो सदस्यता बितरण गरी राखेको छ । सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा संयोजक बनाउने गरी अगाडि बढेका छन् । यस बारे तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
सर्बप्रथम नयाँ संघका पदाधिकारी साथीहरुलाई बधाई, साथै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । एक पटक आँफैलाई ऐनामा हेर्नुस् र नयाँ संघ चलाऊन सुझाब पनि दिन्छु । हाम्रो देशमा पदका धेरै भोका मानिसहरु छन् । तपाईंहरु जस्तै पदका भोकाहरुले फेरी संघ फुटाउन पनि सक्छन्, सजक रहनु होला उहाँहरुले जे जुन काम-कार्यक्रमहरु गर्नु भएको छ त्यो सबै हाम्रो योजना अनुसार नै गर्नु भएको छ । यसमा केही भन्नु छैन ।
अब तपाईं हरु पनि अर्को संघ खोल्ने त होला ? के संघहरु धेरै भएनन् र यसरी ब्यक्ती पिच्छे संघ दर्ता गर्दा ?
हाम्रो संघ पहिला कै छ । उनिहरुले पछाडिको नाम अगाडि र अगाडिको नामलाई पछाडि गरी दर्ता गरेका छन् । हो सही कुरा भन्नु भयो लगानिकर्ता संघहरु को एउटा मात्र उद्देश्य लगानिकर्ताको हक हित र पुँजिबजारको बिकास हो । तर हेर्नुस् यो कुरा मैले धेरै पहिला देखी उठाउँदै आएको छु र आझै पनि उठाइ रहने छु । तर सबै लगानिकर्ता संघका नेताहरुको उदेश्ये एक नहुने रहेछ । सबैलाई पद चाहिने कारणले एउटा मात्र संघ नहुने रहेछ ।
सेयर बजार को बर्तमान अवस्था लाई कसरी हेर्नु भयको छ ?
सेयर बजारमा धेरै कुराहरुले असर गरेको हुन्छ । अहिलेको सेयर बजार घट्दो अवस्थामा नै रहेको छ । दु:खको कुरा कमाइ लगाएर खाने बेलामा पनि लगानिकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । किन हो बुझ्न सकिने अवस्था पनि छैन । त्यसै गरी बैंकको ब्याजदर घट्न सकेको छैन । यो पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा साथै धेरै हल्लाहरु हुन थाले घटाऊने र बढाउनेहरु घमशान चली रहन्छ । यिनै हुन सेयर बजार बढ्न नदिने कारक तत्वहरु त्यसको साथै धर्का कोर्ने साथीहरुको एक मत नहुनु पनि हो ।
अन्त्यमा नेपाली पुँजिबजारको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
अत्यन्तै गाह्रो प्रश्न सोध्नु भयो हेर्नुस् पुँजिबजारको भविष्य मिलाउन सक्ने शायद कोही छैनन र हुन्नन होला । तर अनुमान अवस्थाको मुल्याङ्कन गर्न मात्र सकिन्छ त्यस कारण १८८१ बाट १२८० को बिन्दुमा नेप्से आउँदा धेरै कम्पनीहरुको मुल्य धेरै नै तल आएको छ । होलान कुनै कम्पनिहरु को मुल्य बढि नै होला तर समग्रमा धेरै घटेको हुनाले अब छिट्टै बेरिस ट्रेन्डको अन्त्य हुने छ र आफ्नो लयमा मार्केट फर्कने विश्वास छ । कुनै पनि लगानिकर्ताले नेप्सेको बटम र टप बटम थाहा पाउनका साथै सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्दैनन् । यसरी हेर्दा राम्रो eps कमाइ pe रेसियो भएका कम्पनीहरु छानी छानी किन्ने दिन आएको जस्तो लाग्छ मलाई । धन्यवाद ।
← भारतका वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयरको निधन
कञ्चनपुरको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलायो ,गोली प्रहारबाट ४ जना घाइते
वाइडबडी प्रकरणमा पर्यटनमन्त्रीसहित ३ सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस
१८ पुष २०७५, बुधबार गोक्यो संवाददाता 0
एनबी बैंकको नयाँ एटीएम ठमेलमा